!! #UPDATE #ပြန့်နှံ့နေသော ကြေညာချက်အား #အတိအလင်း ငြင်းဆိုပါသည်။ #ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း ။ | democracy for burma
!! #UPDATE #ပြန့်နှံ့နေသော ကြေညာချက်အား #အတိအလင်း ငြင်းဆိုပါသည်။ #ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း ။
tags: ကိုသားကြီး (မြောင်းမြ) ၀၉ ၂၅၃၉ ၉ ၆၆၆၅, ကိုသူနေအောင် (ပုသိမ်) ၀၉ ၄၅၁၂၄၄၆၉ ၅, ကိုကျော်နနဒ (ပုသိမ်) ၀၉ ၂၅၄၁၆၆၀၇၃, ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း ။, ပြန့်နှံ့နေသော ကြေညာချက်အား အတိအလင်း ငြင်းဆိုပါသည်။, Burma, Government, Myanmar, NATIONAL EDUCATION LAW, Student Protest
ဧရာဝတီ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသား စစ်ကြောင်းကို ဆက်သွယ်လိုပါက
ဧရာဝတီ သပိတ်မှောက်ကျောင်းသားစစ်ကြောင်းကို ပူးပေါင်းပါဝင်လိုတဲ့ ညီနောင် ကျောင်းသားကျောင်းသူနဲ့ လူငယ်တွေ၊ သတင်းအချက်အလက် သိလိုသူတွေ၊ ကူညီပံ့ပိုးချင်တဲ့ မိဘပြည်သူတွေအနေနဲ့ အောက်ပါဖုန်းနံပါတ်တွေကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၁) ကိုသူနေအောင် (ပုသိမ်) ၀၉ ၄၅၁၂၄၄၆၉ ၅
(၂) ကိုကျော်နနဒ (ပုသိမ်) ၀၉ ၂၅၄၁၆၆၀၇၃
(၃) ကိုဝေမှုးသွင် (ရန်ကုန်) ၀၉ ၅၀၇၇၃၄၈
(၄) ကိုဇော်ရမ်း (ရန်ကုန်) ၀၉ ၅၀၂၅၀၁၆
(၅) ကိုအောင်ကျော် (ရန်ကုန်) ၀၉ ၄၀၀၃၀၁၄၆၀
(၆) ကိုစိန်သောင်း (ဟင်္သာတ) ၀၉ ၄၂၂၅၃၄၇၀၄
(၇) ကိုလူမင်း (ထားဝယ်) ၀၉ ၂၅၀၄၇၁၀၉ ၈
(၈) ကိုသားကြီး (မြောင်းမြ) ၀၉ ၂၅၃၉ ၉ ၆၆၆၅
ပြန့်နှံ့နေသော ကြေညာချက်အား အတိအလင်း ငြင်းဆိုပါသည်။
ဤစာမျက်နှာသည် ဒီမိုကရေစီပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် သတင်းများကို တရားဝင် ထုတ်ပြန်ပေးနေသော သတင်းစာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါ ကျောင်းသားများ၏ သပိတ်မှောက် ခရီးစဉ် အပေါ် ပြည်သူလူထု ၏ ထောက်ခံ အားပေး လှူဒါန်း ကြိုဆိုမှုများ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီး ၏ ဝိုင်းရံ ပူးပေါင်း အားဖြည့်မှုများ အရှိန်ကောင်းလာသည်နှင့် အမျှ ကျောင်းသားသပိတ် အပေါ် နာမည်ပျက်စေရန် ပြည်သူအား အထင်အမြင် လွဲမှားစေရန် နည်းလမ်း အမျိုးမျိုး ဖြင့် ဆောင်ရွက်လာသည်ကို တွေ့ရပါသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ် စစ်ကြောင်း သည် ဤ ကော်မတီ အမည် ဖြင့် မည်သည့် ကြေညာချက် မှ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိသေးပါပဲ ကြေညာတစ်စောင် ကိုလည်း အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့နေရပါသည်။
မိမိတို့ လုံးဝ ထုတ်ပြန်ထားခြင်း မရှိပါကြောင်း အတိအလင်း ငြင်းဆိုပါသည်။
ဒီမိုကရေစီ ပညာရေး သပိတ်စစ်ကြောင်း ။
← !! #နမ့်ခမ်းမြို့ နယ် ကုန်းဆာရွာ ၂၃-၁-၂၀၁၅ #ပြည်သူကရဲကို မူးရစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု ဖြင့်ပြန်ဖမ်း
#Myo #Yan #Naung #Thein #နာဂရိုးရာနှစ်သစ်ကူးပွဲတော် ၂၅ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားအမှတ်တရပုံရိပ်များ #naga #25year #anniversary →